Live Nude Girl (2014) 18+ Shaneဟာသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဆီကနေ gentelmen’s club ကို အမွေဆက်ခံရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိလာတာက ''ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်သည်''ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းပါပဲ....ShaneဟာClubကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီး သိပ်မကြာခင်အတွင်းမှာပဲ..Clubကိုဖျက်သိမ်းခံရမဲ့အရေးကိုရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ် ဒီတော့ Shaneတစ်ယောက် အခက်တွေ့ရတော့မှာလား လက်လျှော့သွားမှာလား Shaneနဲ့အတူသူ့မိတ်တွေကရော.. သူနဲ့အတူ ဒီပြဿနာကိုတွန်းလှန်နိုင်မှာလား အဲဒီမေးခွန်းများစွာရဲ့အဖြေကိုတော့ချန်ထားပါရစေ.... အထက်ပါတိုင်းညွန်းထားလို့ ဒီဇတ်ကားဟာရိုးစင်းလွန်းပါတယ်လို့ထင်ရင်မှားသွားပါမယ်.. ဇတ်လမ်းအစကနေကို ကောင်မလေးတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအလှတွေ အချို့ဖော်ချွတ်မှုတွေ ဒါ့အပြင် ဇတ်လမ်းပေါ်မပျင်းရိသွားရအောင် ဟာသလေးတွေပါနှောရင်း လှည့်ကွက်တွေလဲပါဝင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကြည့်ရင်းဗဟုသုတလေးတွေပါရယူနိုင်ပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ညွန်းပြရင်း ဒီလောက်နဲ့တစ်ခန်းရပ်ခွင့်ပြုပါ... File Size : 770 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 1hr 40 minute Format : Mp4 Genre : Comedy Encoder : Joker.phs Download And watch With Pcloud Link Full HD Download And watch Pcloud Link Small File Size (ဇာတ်ကားအညွန်းရေးသူကတော့ John La Yaung ပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
IMDB: 4.1/10 1,004 votes
Live Nude Girl (2014) 18+
22 Jump Street (2014) 2014 ခု နှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ 22 Jump Street ဇာတ်ကားဟာ IMDb Rating 7.6 အထိရရှိထားတဲ့ ရဲဟာသဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်..2012 က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ 21 Jump Street ရဲ့ အဆက်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာပါတယ်..2ကားလုံးကတော့ ဟာသအက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ဖန်တီးထားတဲ့နေရာမှာလည်းသေသပ်သလို ဟာသလည်းမြောက်ပါတယ် 21 Jump Street မှာတော့ ကျောင်းတုန်းက မတည့်တဲ့ သူငယ်ချင်း2ယောက် ကျောင်းပြီးလို့ရဲထဲဝင် တဲ့အခါ အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်ရင်း ထူးခြားတဲ့အမှုအတွက် ကျောင်းပြန်တက်ရပြန်ပါတယ်.. ကျောင်းတက်ရင်းဘယ်လိုတလွဲတွေနဲ့ အမှုလိုက်ကြမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရမှာပါ ယခု တင်တဲ့ဇာတ်ကား 22 Jump Street ကတော့ အဆက်အနေနဲ့ဆက်လက်ရိုက်ကူးထားပါတယ် 21 Jump Street ကို မကြည့်ရသေးသူများ အတွက်လည်းအောက့်မှာလင့်ပြန်ပေးထားပါတယ်..။ Filesize : 560 MB Quality : Blu-ray720p Format : mkv During : 1:51:56 Subtitle : Myanmar Subtitle ( Hardsub ) Encoder : LK
Ghost Seeing Detective Cheo Yong Season 1 မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb rating 8.1 ရထားပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား ဂျီဟိုအိုး ကလည်း ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ သိပ်စိမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ရှုပ်ထွေးလှသော မှုခင်းများကိုလိုက်လံ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရင်း မမျှော်လင့်ပဲ တွဲဖက်သူငယ်ချင်းကိုဆုံးရှုံးထားရတဲ့ ရဲစုံထောက်ကြီးဟာ ပရလောက ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေနဲ့ ဆက်နွယ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေများဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ပရိတ်သတ်ကြီး က ရင်ထိတ်သည်းဖိုကြည့်ရှူရမှာပါ Season 1 မှာစုစု ပေါင်း ၁၀ ပိုင်းရှိပြီး အကုန်လုံးကို တပါတည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ ဘာသာပြန်ကတော့ StarLet ဖြစ်ပါတယ်ဗျ Download ========================== Ep01 Ep02 Ep03 Ep04 Ep05 Ep06 Ep07 Ep08 Ep09 Ep10
Ghost Seeing Detective Cheo Yong Season 1 မြန်မာစာတန်းထိုး
Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast (2014) အတောင်ပံတစ်စုံနဲ့နတ်သမီးလေးတွေအများစုနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခု သူတို့ဗိမ္မန် မှာ ဘုရင်မတစ်ပါးအုပ်ချုပ်တယ် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုရှိသလို ကန့်သတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမြောက်များစွာလည်းရှိတယ် အထူးသဖြင့် နတ်သမီးတွေကိုရန်ပြုမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအနေနဲ့ သူတို့နေတဲ့အနားကိုအကပ်တောင်မခံတာပါပဲ ဒါကလည်း ရှေးရိုးအစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ကမ်းရေးသားခဲ့တဲ့ မူတွေ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် လုပ်နေရတာပါပဲ ဒီထဲမှာတမူကွဲထွက်လာတာက FAWNလို့ခေါ်တဲ့နတ်သမီးလေးတစ်ပါးပါပဲ ရက်စက်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကောင် ကြီးတွေမှာ လည်းသူတို့လို့နှလုံးသားရှိလေတော့ သိမ်မွေ့နူးညံခြင်းတွေရှိမှာပဲလို့သူခံစားနေရတယ် အဲ့ဒါကြောင့် ရှေးအစဉ် အလာသတ်မှတ်ချက်တွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ရက်စက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အကောင်တွေကိုလက်ပွန်းတနီးနေကြည့်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ကာ ကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အမြင်စောင်းမှုခံရသလို ဘုရင်မ သတိထားမိစရာလည်းဖြစ်လာတယ် ဒါပေမဲ့သူလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး တစ်နေ့တော့ အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ ခြေ၄ချောင်းနဲ့အကောင်ကြီးကို ဂူတစ်ဂူမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကြီးရဲ့အခက်အခဲ ကိုဖြေရှင်းပေးတော့ သံယောဇဉ်တွေတွယ်မိကြတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဟာ ရှေးကရေးခဲ့တဲ့စာတွေအရ အန္တရယ်အရှိဆုံး အကောင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင် သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့သူတို့နတ်ဘုံလေးကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူဖြစ်နေတယ် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရယ် FAWNလို့ခေါ်တဲ့နတ်သမီးလေးရယ် ခြေ၄ချောင်းပါကြောက်စရာအကောင်ကြီးရယ် ဆက်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေက တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပါ ဒီကားက ANNIMATIONကားဆိုပေမဲ့ ကလေးတွေအတွက်ရောလူကြီးတွေအတွက်ရောပါ ဆင်ခြင်စရာတွေပေးတဲ့ဇတ်ကားလေးပါ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေကို ၁ဖက်ပိတ်အမြင်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာတွေရယ် ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားစေရာအတိုင်းလုပ်ခဲ့တာတွေ စူးစမ်းဆင် ခြင်စိတ်လေးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအဖြစ် Messageပေးတဲ့ဇတ်ကားလေးပါ နောက်ခံသီးချင်းလေးတွေကလည်း ...
Jinn (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး ကဲ ပုရိတ်သတ်ကြီးတို့အတွက် မှော်ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးပါရစေ။ Horror စာရင်းထဲသွင်းထားသော်လည်း ကြောက်လန့်စရာ သိပ်မပါပဲ မှော်အစွမ်းတွေပဲပါနေတာမလို့ မှော်ကားလို့ပြောလိုက်ပါရစေ။ ဂျင် တွေဆိုတာနဲ့ Supernatural ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ဖူးသူတွေ သိကြမှာပါ။ ဂျင်တွေဆိုတာ တကယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ အယူအဆတွေကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ အကိုးအကားတွေနဲ့ အကျယ်တ၀င့် ဖေါ်ပြထားတွေ ရှာဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဂျင်ဆိုတာလည်းအမျိုးကွဲ တစ်ခုပါပဲ သူတို့ထဲမှာဆိုးသူတွေရှိသလို ကောင်းသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဆိုးသူနဲ့ ကောင်းသူဆိုတာအမြဲဒွန်တွဲနေပြီးအမြဲ ယှဉ်ပြိုင်နေရတာလေ....။ ရှောင်က သာမညလေးပါ ကားဒီဇိုင်းတွေထုတ်ပေးရတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မမျှော်လင့်ပဲ ပါဆယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာပါတယ် အဲဒါကသူ့ဘ၀ကြီးအတွက်အရေးကြီးသတင်းအချက်လက်တွေယူဆောင်လာတာပါ။ တကယ်တော့ ရှောင်တို့တစ်ဆွေမျိုးလုံးက ဂျင်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်နဲ့ ပက်သက်နေပြီး ဂျင်တွေကသဲကြီးမဲကြီး မရမက လိုက်ရှာပြီးအဖျက်ဆီးခံနေရတာပါ... ရှောင်တစ်ယောက် သူရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေ ဘယ်လိုသုံးမယ်... ဘယ်သူတွေက သူ့ဘက်မှာတည်ရှိနေပြီး ဘယ်သူတွေက လိုက်ဖျက်ဆီးမယ် ဆိုတာကိုတော့ ပုရိတ်သတ်ကြီးကပဲ ဆက်လက်အားပေးကြပါ (ဘာသာပြန်နဲ့ အညွှန်းရေးသူကတော့ Aye Min Ooပဲ ဖြစ်ပါတယ်) File Size : 696Mb Quality : HD 720P Quality : HD 360P Running Time : 1h 37m Translated ...
Jinn (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Girl’s Blood 2014 မြန်မာစာတန်းထိုး 18+ (Adult Movie) မိန်းမ လက်ဝှေ့ နပန်း လောက အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ 18+ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းကတော့ Actionပိုင်းကိုဇတ်အိမ်တည်ထားပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Lesbianကားလေးပါ မိန်းမချင်းလည်းချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲဆိုတာ ဖော်ပြထားပုံပါပဲ...ဒီတော့ အညွန်းကိုဆက်သွားရအောင်.. ..Girl's Bloodတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနေရာကို တရားမဝင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပြီး Andos ဂိုဏ်းကလာရောက်ပြောဆိုပါတယ် ဒီလိုပြောဆိုရတာကလည်းAndosဂိုဏ်းချုပ်ရဲ့မိန်းမနဲ့ Girl's Blood Teamထဲကကောင်မလေးနဲ့က ငြိစွန်းနေကြလို့ပါပဲ... ဒီတော့ပွဲကကြည့်လို့ကောင်းသွားပါပြီး ဘာလို့ဆို Girl's Blood teamရဲ့ခေါင်းဆောင်ကAndosဂိုဏ်းကိုအသေအကြေတိုက်ဖို့စိန်ခေါ်ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်...ကောင်မလေးချောချောလေးတွေရဲ့လန်းလွန်းတဲ့ Fightingခန်းတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ကြရဦးမှာပါ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကားမှာသူချပြတဲ့အကြောင်းရင်းက..အနေနီးရင်ရန်သူကနေမိတ်ဆွေအစစ်တောင်ဖြစ်လာနိုင်သေးပါလားဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပုံဖော်ထားပါတယ် ဇာတ်ကားကို John La Yaung (Myo Zin) မှ ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ File Size : 642 MB Quality : BlueRay 720P Length : 2h 7m Translated by : John La ...
Girl’s Blood 2014 မြန်မာစာတန်းထိုး 18+ (Adult Movie)
The Target (2014) အလွတ်စုံထောက်မှ အနားယူပြီး အိမ်ပြန်လာသူတစ်ဦးဖြစ်သူ Yeo-Hoon မှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့် သူကိုယ်တိုင်နားမလည်နိုင်သော ကုမ္ပဏီ CEO သေဆုံးသည့်အမှူ့တွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သတ်မိပြီး ပစ်ခတ်မှူ့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုပစ်ခတ်မှူ့မှာ ဂိုဏ်းစတားတို့ကိုယ်စား အမှု့အတွက်ကြိုတင် တရားခံအဖြစ်ထောင်ထဲကို အစားဝင်ဖိုိ့ရွေးချယ်ထားသူ မဟုတ်ပဲ မမျှော်လင့်ပဲ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်နေတဲ့ Yeo-Hoon ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ပစ်ခတ်မှူ့ဖြစ်ပြီး Yeo-Hoon တစ်ယောက် ဒဏ်ရာနဲ့ဆေးရုံရောက်ပြီး သတိမေ့နေတဲ့အချိန်မှာ Yeo-Hoon ကိုကုသတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ အမျိုးသမီးကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး Yeo-Hoon ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ခေါ်ထုတ်လာခိုင်းတယ်။ ဆရာဝန်လုပ်သူပါ အမှူ့ထဲကို ဇနီးအတွက်နဲ့ပါဝင် ပတ်သတ်မိပြန်တယ်။ ဂိုဏ်းစတားအဖွဲ့ကလည်း ဒီအမှူ့ကို ပိတ်အောင် စုံထောက်ခေါင်းဆောင်ကို လာဘ်ထိုးပြီး ကျန်လူများကိုရှင်းခိုင်းပါတယ်။ အခွင့်အာဏာ အသုံးပြုခွင့်ရှိနေသော စုံထောက်ခေါင်းဆောင်ကို အပိုင်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့ အမှူ့မှန်ကို အာဏာနဲ့ ဖုံးကွယ်လိုက်တယ်။ Yeo-Hoon ...
May Be This Time(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး ကဲအမျိုးတို့ရေ ... တာတီပိုးလာရင်တော့ Comedy Romance လေးတွေ ပါမယ်ဗျာ ... နည်းနည်းကြာသွားတာတော့ အားနာမိတယ်ဗျာ ... ဒီကားလေးကတော့ Pinoy Movie လို့ခေါ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ကားလေးတစ်ကားပါပဲ ... နွေရာသီတစ်ခုမှာ စတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခု ... ၀မ်းနည်းမှုတွေနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ ခုနှစ်နှစ်ကြာမှ ပြန်တွေ့ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာ ... ကောင်မလေးရဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့ ကောင်လေးက ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ် ... အဲ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူကြည့်ရှုကြပါကုန် .... ဒီကားလေးထဲမှာ အဆင့်အတန်းမတူညီတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အချစ်ဆိုတာက ညှိယူလို့မရဘူးဆိုတာကို ပြသထားတာတွေ့ရပြီးတော့ ရသခံစားမှုတစ်ခုကို ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာ File Size : 800 MB Quality : Web Rip Running Time : 1hr 53 minute Format : Mp4 Genre : Comedy, Drama,Romance Encoder : ...
May Be This Time(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Legend of the Ancient Sword (2014) Series နတ်ဘုရား တွေ နတ်ဆိုး တွေ ရဲ့ စစ်ပွဲကြားက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဓါးတစ်ချောင်း အကြောင်းကနေ စထားတဲ့ အကောင်းဆုံး တရုတ်သိုင်း ဇတ်လမ်းတွဲပါ... Download List ------------------ Ep 1 - Gdrive Link / Openload Link Ep2- Gdrive Link / Openload Link Ep3- Gdrive Link / Openload Link Ep4- Gdrive Link / Openload Link Ep5- Gdrive Link / Openload Link Ep6- Gdrive Link / Openload Link Ep7- Gdrive Link / ...
Legend of the Ancient Sword (2014) Series
HeroPanti (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Download & Watch
How to Train Your Dragon2(2014) How to Train Your Dragon2(2014) IMDb - 7.8/10_____Rotten - 91% နဂါးတှနေဲ့ ပွလေညျမှုရသှားပွီး နဂါးတှရေဲ့ လုပျအားနဲ့ ပွနျလညျတိုးတကျလာခဲ့တဲ့ Berk ရှာလေးဟာ နဂါးပွိုငျပှဲ ကငျြးပနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Hiccup ကတော့ သူရဲ့ နဂါးလေး Toothless နဲ့အတူ နယျမွသေဈ ရှာဖှမှေုတှေ ပွုလုပျရငျး အေးအေးလူလူပဲ နထေိုငျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရှယျလှနျလာပွီဖွဈတဲ့ Stoick ကတော့ သူ့သား Hiccup ကို ရှာသူကွီးလုပျဖို့ ဖိအားပေးစ ပွုနပေါပွီ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု မရှိသေးတဲ့ Hiccup အတှကျတော့ ဒီကိစ်စဟာ အကွီးမားဆုံး စိနျချေါမှုတဈခုပါပဲ။ အပွောကယျြတဲ့ မွကေမ်ဘာမှာ လြှောကျသှားရငျး Hiccup နဲ့ Astrid တို့ဟာ အလှနျကွီးမားတဲ့ အစိမျးရောငျ ရခေဲတုံးကွီး တဈခုကို တှပေ့ါတယျ။ ...
IMDB: 7.8/10 296,449 votes